कोरोनाको नयाँ प्रजाति नेपालमा छ/छैन भनेर पत्ता लगाउँदै सरकार « Mechipost.com
कोरोनाको नयाँ प्रजाति नेपालमा छ/छैन भनेर पत्ता लगाउँदै सरकार
प्रकाशित मिति: १२ पुष २०७७, आईतवार २१:३१
फिदिम । सरकारले कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति नेपालमा भित्रिएको छ–छैन पत्ता लगाउन काम अघि बढाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले युरोपमा देखिएको कोरोनाको नयाँ प्रजाति नेपालमा पनि भित्रिएको हुनसक्ने भन्दै पत्ता लगाउन काम अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनले त्यसका लागि बेलायतबाट आउने व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्ने काम भइरहेको बताए।
“पुस ७ गतेसम्म बेलायतबाट नेपाल आउने ३ सय ७७ जना छन्। उनीहरूको परीक्षण भइरहेको छ। कसैको पोजेटिभ देखिए नयाँ भाइरस हो–होइन भनेर पत्ता लगाउन ‘जिन सिक्वेन्सिङ’ गर्छौं” उनले भने।
सह–प्रवक्ता अधिकारीले अहिलेसम्म परीक्षण भएकामध्ये कसैमा पनि कोरोना पोजेटिभ नदेखिएको बताए। बेलायतमा नयाँ प्रजातिको कोरोना देखा परेको पाइएपछि सरकारले पुस १ देखि ७ गतेसम्म बेलायतबाट आउने मानिसलाई अनिवार्य ‘होटल क्वारेन्टिन’ मा बस्न अपिल गरेको थियो। साथै नजिकका सरकारी प्रयोगशालामा गएर परीक्षण गराउन पनि भनेको थियो।
अब परीक्षण गराएकामध्ये पोजेटिभ आएकाहरूको ‘जिन सिक्वेन्सिङ’ गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ। उक्त प्रविधिबाट भाइरसमा के–के फरक छ भनेर पत्ता लगाइन्छ। ‘जिन सिक्वेन्सिङ’ पिसिआर मेसिनबाटै गर्न सकिए पनि त्यसका लागि छुट्टै ‘रिएजेन्ट’ चाहिन्छ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी डा. राजेशकुमार गुप्ताले अहिले ‘जिन सिक्वेन्सिङ’ का लागि चाहिने मेसिन र ‘रिएजेन्ट’ नभएको र भएको अवस्थामा यहीँको जनशक्तिले उक्त काम गर्न सक्ने बताए। उनले यसका लागि ‘जिन सिक्वेन्सिङ पिसिआर मेसिन’ र ‘रिएजेन्ट’ छुट्टै चाहिने जनाए।
उनले अहिले बेलायतबाट आउने यात्रुहरूको परीक्षण भइरहेको र परीक्षण गरिएकामध्ये कसैमा संक्रमण देखिए मन्त्रालयको समन्वयमा ‘जिन सिक्वेन्सिङ’ का लागि काम अघि बढाइने जनाए। मन्त्रालयका सह(प्रवक्ता अधिकारीले ‘जिन सिक्वेन्सिङ’ गर्न दुई विकल्प रहेको बताए।
“आवश्यक तयारी गरेर नेपालमै गर्ने वा विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग सहकार्यमा रहेका विदेशी प्रयोगशालाहरूमा पठाउने”, डा। अधिकारीले भने, “हामी छलफल गरेर कुनमा जाने भन्ने तय गर्छौं।”
नेपालका प्रयोगशालाहरूले भने ‘रिएजेन्ट’ आए आफैंले ‘जिन सिक्वेन्सिङ’ को काम गर्न सकिने बताएका छन्। यसका लागि छुट्टै जनशक्ति नचाहिने भन्दै अहिले पिसिआर परीक्षणमै खटिएका प्राविधिकले ‘जिन सिक्वेन्सिङ’ को काम पनि गर्नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
बेलायतमा देखिएको भनिएको उक्त नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस पहिलेभन्दा ५६ प्रतिशत बढी संक्रामक रहेको अध्ययनहरूले जनाएको छ। अर्थात् नयाँ प्रजातिको भाइरस पहिलेको भन्दा छिटो शरीरभित्र प्रवेश गर्नसक्छ। अहिले उक्त प्रजातिको भाइरस फ्रान्स, स्पेन, क्यानाडा, जापानलगायत अन्य देशहरूमा पनि देखा पर्न थालेको छ।
यसरी पहिलो महामारी सेलाउन नपाउँदै कडा स्वभावको नयाँ प्रजातिको कोरोना देखिन थालेपछि सर्वत्र चिन्ता थपिएको छ। यसको जोखिम नेपालमा पनि औल्याउँदै सरकारले प्रारम्भिक रोकथामको काम अघि बढाएको छ।
सह–प्रवक्ता अधिकारीले भने, “दक्षिण अफ्रिकालगायत अन्य मुलुकहरूमा पनि पत्राचार भइसकेको छ। त्यसैले बेलायत मात्र हैन सबै मुलुकहरूको हकमा पनि लागू हुने गरी काम अघि बढाएका छौं। अब बाहिरबाट आउने सबैको परीक्षण गर्ने र पोजेटिभ आएकाको ‘जिन सिक्वेन्सिङ’ गर्छौं।”
विज्ञहरूले कोरोनाको नयाँ प्रजाति नेपाल भित्रिए नियन्त्रण गर्न अझ कठिनाइ हुने भन्दै समयमै नियन्त्रणको कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। बढी संक्रामक रहेकाले पनि नयाँ प्रजाति भित्रिए यसबाट संक्रमण र मृत्यु दुबै बढ्ने उनीहरूको तर्क छ। जसका लागि पहिले गरिँदै आइएको परीक्षण र ट्रेसिङको कार्य अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उनीहरूको विज्ञहरूको जोड छ। (सेतोपाटी डटकमबाट)